Ayikwazi ukutshintsha Radio (NAV1) on Air France Airbus 380
umbuzo Ayikwazi ukutshintsha Radio (NAV1) on Air France Airbus 380
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #442 by spilok
Ndikhe ndazama yonke into, kodwa andikwazi Ukutshintsha amaza omoya erediyo (NAV1) on Air France Airbus 380. Ndiyayithanda moya kodwa lwanto kum ukuba andikwazi ukutshintsha amaza erediyo.
Yintoni imfihlelo? Ndicela uncedo.
Enkosi nalamkelayo: 45
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #443 by Dariussssss
Enye apha ... Enyanisweni, onke A380s PA loo ngxaki.
Mhlawumbi, ukuba kukho indlela ukubuyisela ukuba unomathotholo okanye nantoni na, kunye omnye Boeing ezaziza kumnceda, kodwa musa ukucinga ukuba kunokwenzeka. Ndikhumbula, in FS2004 ukuba bekunokwenzeka.
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #444 by Dariussssss
Ndakwazi ayilungise. Izinto ozidingayo A321 yakho ngokungagqibekanga.
ulawulo iPhaneli evulekileyo,
khangela kwaye ukuvula ifayile panel.cfg,
khuphela le layini:
(Nje abo nezabeBala), musa ukukhuphela ukuba Window01, oko mosha lenjongo yakho A380.
Yiya A380 yakho,
Panel.cfg ifayile ivula,
khangela kwaye endaweni yonke imigca kwi Radio.
Ndafunyaniswa imizuzu embalwa iphele, waza wenza yokumisa omhle.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: spilok, Gh0stRider203, geniousabhishe1
Enkosi nalamkelayo: 21
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #445 by Gh0stRider203
Uze ekuzukisekeni yimemo bathumela ....
Radios kwi Airbus zi inkalo. Kinda ngathi blinkers kwi BMW
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #446 by Dariussssss
Ayivumelekanga: ukudibanisa attachements.
Ixesha ukwenza page: 0.130 imizuzwana